Ostarine (MK2866) ntụ ntụ (OTR-AC) ụlọ ọrụ na-emepụta ihe
/ ngwaahịa / SARMS / Ostarine (MK2866) ntụ ntụ
Rating: SKU: 1202044-20-9-1. Category: SARMS
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkwa nke Ostarine (MK2866) ntụ (1202044-20-9), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa mmachi.
Ostarine (MK2866) ntụ ntụ, nke a makwaara dị ka MK2866 ntụ ntụ bụ SARMS (modul nhọrọ androgen receptor) nke GTx kere iji zere ma na-emeso mmebi ahụ ike.SARMS jikọtara androgen receptor (AR) ma gosipụta ọrụ osteo (ọkpụkpụ) na myo (muscular) nhọrọ anabolic. Kekọta na mkpali na-eme ka njikọ protein sie ike ma na-ewuli ahụ ike.
Ostarine (MK2866) uzuzu uzuzu
Raw Ostarine (MK2866) ntụ ntụ isi agwa
aha: Ostarine (MK2866) ntụ ntụ
Usoro Molecular: C19H10D4F3N3O3
Molekụla arọ: 393.35
Melt Point: 70 ka 74 Celsius C
Ubochi omumu SARM OTR-AC (MK-2866 Dochie)
Ostarine MK-2866 ntụ ntụ bụ Modulator Androgen Receptor Modulator (SAS CAS 1202044-20-9). Emepụtara ya site na ụlọ ọrụ ọgwụ na-akpọ GTX iji nyere ndị mmadụ aka ịlụso ọnọdụ mgbu ahụ ọgụ. Ọ na-eweta ihe ngwụcha site na ijide ndị na-anabata gị na androgen na otu ụzọ dị ka ndụmọdụ ma ọ bụ steroid nke anabolic.
Site na mmepe nke sayensị, ndị kemịkal sịntetik na-enyochagharị otu esi agbanye ókè nke mmepe SARM iji bulie ike, biodistribution, ọkara ndụ, na nhọrọ anụ ahụ, ebe ha ka na-ebelata mmetụta / mmetụta na-adịghị mma. OTR-AC, nke a na-akpọkwa MK-2866 Ester, bụ nke klas nke ogige a maara dị ka "anabolic esters" n'ihi esterification n'oge chemical njikọ, nke na-eme ka ọbara testosterone etoju ọzọ kwụsie ike na-adịte.
OTR-AC bụ mmalite nke MK-2866, ọ nwere ihe ndị yiri kemịkal na usoro nke ime ihe, na-enwe obere mmetụta. Yabụ, ntụ ntụ OTR-AC ejirila nwayọọ nwayọọ dochie ntụ ntụ MK-2866 n'ahịa.
Kedu ka OTR-AC (MK-2866 Ester) si dị -arụ ọrụ?
Dị ka SARM niile, OTR-AC na-arụ ọrụ site na ijikọta ndị na-anabata etrogen na ahụ gị, na-egosi mọzụlụ ịmalite ịmalite ngwa ngwa na ịrụzi.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, SARM OTR-AC na-amalite ịrụ ọrụ obere oge ka erichara nri, na-egosi ahụ gị ka ọ banye na akwara nke akwara n'oge dị mkpirikpi. Ihe na-eme OTR-AC pụrụ iche bụ na ọ na-ahọrọ ihe okike. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ na-enye steroid dịka mmetụta, na-enweghị aromatization.
Ọ bụ ezie na OTR-AC (Ostarine ntụ ntụ) anaghị eme ka ahụ dị mma, ọ ka ga-ahụrịrị na nke a anaghị eme ka ọ dị nchebe karịa ndị steroid-n'eziokwu, ọtụtụ ekwuola na aromatization dị mkpa maka ahụike zuru oke.
SARM OTR-AC (MK-2866 Ester) Uru & Nsonaazụ Na-atụ Anya
Enwere ọtụtụ uru nke OTR-AC ụfọdụ n'ime ha ka akpọrọ n'okpuru:
❶ Uru dị na ahụ ike
Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo nri ma ị na-eji OTR-AC. Mgbe ahụ i nwere ike irite ihe ruru kilogram iri na otu, ma ọ dị iche na mmadụ n'otu n'otu, ụfọdụ nwere ike irite ihe ruru kilogram iri na ise, ụfọdụ ritere uru dị ka kilogram ise, mana ọnụọgụ ga-erute kilogram iri isii na asatọ. Uru uru dị ezigbo mkpa maka ndị na-arụ ozu ahụ ka azụmahịa niile chọrọ ndị mmadụ buru ibu iji kwado ụdị. Inwe uru n'ime oke akwara na-eme ka ike dịkwuo ike, nke ahụ na-ejide n'aka na ị nwere ike igosipụta onwe gị na ọkwa mba ụwa ma nwee ntụkwasị obi na arụmọrụ gị.
❷ Na-agwọ ọkpụkpụ gị na akwara gị
Ostarine nwere ike inyere gị aka iji ọgwụgwọ anụ ahụ na ịba ụba ọkpụkpụ nke ahụ. Nke a nwere ike ime ka sel ndị na - arụ ọrụ rụọ ọrụ nke na - enyere aka ịmaliteghachi akwara. Nke a na - eduga n'ịgbake ngwa ngwa site n'ụdị ụdị mmerụ ọ bụla dị ka ntụgharị anụ ahụ kachasị. Gwọọ akwara gị ga-ejide n'aka na ị laghachiri n'egwuregwu n'oge obere oge. Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu enweela nsogbu ịgwọ ọrịa n'oge gara aga ebe ha were ezumike dị ogologo site na ụlọ ọrụ ahụ iji weghachite, mana ha enweghị ike ịlaghachi dịka asọmpi ahụ mụbara n'oge nkwụsịtụ ahụ. Ma OTR-AC / MK-2866 nwere ike inyere gị aka ịme ngwa ngwa na ịba ụba njupụta akwara ka ị nwee ike ịlaghachi azụ ozugbo enwere ike site na ike na ume dị elu. Mmụba nke oke ọkpụkpụ nwere ike inyere gị aka ịlụ ọgụ megide ụdị nsogbu Ọkpụkpụ na ahụ gị; ị nwere ike sie ike, na ohere nke ọnya ọkpụkpụ na-erughị.
❸ Abụba anaghị adị
Dika arọ ahụ na-abawanye, abụba na-agba ọkụ ngwa ngwa ma na-enyere gị aka ịkwụsị ibu kachasị oke mgbe ị na-arụ ọrụ ahụ gị. Ibu ibu na oke abụba bụ isi okwu ụwa na-eche ihu ugbu a, ọ bụkwa otu n'ime isi ihe kpatara ọnwụ. Abụba nwere ike ịgba ọkụ nke ọma mgbe mọzụlụ chọrọ ume iji dozie onwe ya, a na-ewepụkwa ume ahụ site na mkpụrụ ndụ abụba. N'ihi ya, a na-agbaji mkpụrụ ndụ abụba. Ka ị na-azụkwu akwara buru ibu na ahụ, ọtụtụ abụba na-efunahụ gị. Dika OTR-AC (MK 2866) na-eme ka akwara aru ahu di ike, aru choro ike karia, ya mere, abuba na-ere oku ngwa ngwa, i gha ahu oke mbelata nke aru nke aru.
❹ obi Health
Enobosarm na - enyere aka n’ịnọgide na - enwe ọsịsi ike n’ọrịa ndị na - arịa ọrịa obi. A na-edozi usoro ọgwụgwọ na milligrams 1-3 kwa otu. Ọ na-ebelata ọkwa kọlesterol dị njọ nke ahụ nwere ike inyere gị aka ịbelata triglycerides na ahụ. Na-enyere aka belata ogo glucose n'ọbara ma na-eme ka insulin na-eguzogide ahụ.
❺ Na-agba ume
Ọ na - enyere ndị bodybuilders na ndị egwuregwu aka ịtachi obi na ebuli nnukwu ibu. Ọgwụ ahụ na-enye ume ogologo oge maka ọzụzụ ruo ogologo oge. Ọ na - enyere aka n'iwekwu calorie karịa ka ị na-eri ụbọchị izugbe na-ebute ọnwụ. Ọ na - eme ka njigide nitrogen dị n’ahụ. Anyị kwesịrị ịghọta ihe ume bụ?
Ntachi obi abụghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị ike na ume nke na-enye gị ohere ịme mgbalị maka ogologo mbọ anụ ahụ ma ọ bụ nke uche dị mkpa iji mezue ọrụ. Increasebawanye ike na akwara bụ ihe kwesịrị ekwesị na mmụba nke ume. N'ihi ya, anyị nwere ike ikwu na OTR-AC / MK2866 na-akwalite ume ahụ kacha mma.
OTR-AC Nhọrọ Dị Mma Dị Ka MK-2866 Dochie
OTR-AC bụ nsonaazụ nke MK2866 ester, na-ewere OTR-AC nwere ike nweta nsonaazụ niile chọrọ nke MK2866, nke a maara nke ọma n'okpuru aha azụmaahịa nke ostarine nke na-eji ọganihu dị elu na sayensị nke na-enyere ndị na-eme egwuregwu egwuregwu ezigbo ụzọ ọzọ na ndụmọdụ mgbe ọ bịara iji nyefee uru dị ngwa na ike na ume. Mgbe ọ dị ka ndụmọdụ dị na ụfọdụ n'ihi na ọ na-arụ ọrụ site na ụzọ androgen dabere n'okporo ụzọ anabolic, ọdịiche dị n'etiti SARM dị ka nke a na ndụmọdụ bụ na mmetụta a na-elekwasị anya n'akụkụ akụkụ nke akụkụ nke akụkụ dị iche na mmetụta nke androgenic nke nwekwara ike ịkọwa androgens nke di iche-iche.
N'okwu laymans, ị nwere ike ịtụ anya ịhụ mmetụta yiri anabolic dịka steroid ma ọ bụ ndụmọdụ ma na-enweghị ọdịda nke mmetụta androgenic dị ka nrụgide dị ukwuu na ntutu isi. Site na nsonaazụ na-ewe otu izu ma ọ bụ obere iji banye, nke a bụ SARM nke na-enye ezigbo ụzọ ọzọ maka ndị ọrụ na-achọ ngwa ngwa kama na-achọ izere steroid ma ọ bụ ndụmọdụ. Mgbe MK2866 ntụ ntụ adịghị na ahịa, ntụ ntụ OTR-AC nwere ike ịhọrọ dị mma maka ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ ahụ.
 KL Johansen, K. Mulligan, na M. Schambelan, "Anabolic mmetụta nke nandrolone decanoate na ndị ọrịa na-enweta dialysis: A randomized achịkwa ikpe," J. Am. Ahụike. Assoc., 1999.
 FF Ip, I. Di Pierro, R. Brown, I. Cunningham, DJ Handelsman, na PY Liu, "Testo testosterone na-ebu amụma banyere mmepe nke polycythemia na ụmụ nwoke hypogonadal ọgwụgwọ ruo afọ 21 na subcutaneous testosterone pellets," Eur. J. Endocrinol., 2010.
 RS Gudde na JR Addicam, "Comparative evaluation nke testosterone ntọhapụ na ya esi na okenye nwoke enwe," Open Androl. J., 2012.
 T. Piper et al., "Nnyocha na vivo metabolism nke SARM YK11: ificationchọpụta na njirimara nke metabolites nwere ike ịba uru maka njikwa doping," Nnwale Ọgwụ. Ike., 2018.